Redox, inoshanda sisitimu yakanyorwa neRust programming mutauro | Linux Vakapindwa muropa
Redox, inoshanda system yakanyorwa neRust programming mutauro
Mushure megore rekuvandudza, kuvhurwa kweshanduro nyowani yeRedox 0.5 inoshanda system yakaziviswa, iyo Chinonyanya kukoshesa ndechekuti kukura kwayo kuri kushandisa Rust mutauro uye iyo microkernel pfungwa.
Izvo zvinoitika zveprojekti inogoverwa pasi pemahara MIT rezinesi. Zvekuyedza muVirtualBox kana QEMU, chaiyo bhutsu mifananidzo inopihwa kune yega yeizvi.
Iyo Redox mushandisi nharaunda yakavakirwa paOrbital GUI inomhanya paWayland. Netsurf inoshandiswa sewebhu browser.
1 Nezve Redox
2 Zvinyorwa zvitsva zveRoxox 0.5
The operating system inoshandisa iyo pfungwa ye microkernel, uko iko chete kudyidzana pakati pezvakaitwa uye manejimendi manejimendi zvinopihwa padanho rekernel uye kumwe kushanda kwese kunoendeswa kumaraibhurari ayo anogona kushandiswa neese kernel nevashandisi vamiririri.
zvose vatongi vanomhanya munzvimbo yemushandisi mune sandbox sandboxes. Zvekuenderana nezviripo zvinoshandiswa, yakakosha POSIX denderedzwa inopihwa iyo inokutendera iwe kumhanya mazhinji mapurogiramu pasina porting.
Redox inogadzirwa zvinoenderana neiyo Unix uzivi, kukwereta mamwe mazano kubva kuSeL4, Minix, uye Plan 9.
Iyo sisitimu inoshandisa musimboti "zvese i URL".
Semuenzaniso, iyo URL "log: //" inogona kushandiswa kutema matanda, kudyidzana pakati pezvirongwa "bhazi: //", kubatana kweterevhizheni "tcp: //", zvichingodaro.
Ma module anogona kuitwa muchimiro chevatyairi, kernel extensions uye vashandisi vamiririri vanogona kunyoresa avo vanobata URL, semuenzaniso unogona kunyora module kuti uwane maI / O madoko uye uisunge ku URL "port_io: / /", Mushure iyo iwe yaunogona kushandisa kuwana doko 60 kuburikidza nekuvhura iyo url "port_io: // 60".
Iyo purojekiti iri kuvandudzawo yayo batch maneja, seti yezvishandiso zvakajairika (binutils, coreutils, netutils, extrautils), iyo "ion" yekuraira shell, vod-sodhidhi mameseji edhita, network network uye iyo TFS faira sisitimu yakagadziridzwa pahwaro hwepfungwa dzeZFS. ).
Iyo yekumisikidza yakaiswa mumutauro weToml. Iyo sisitimu parizvino inotsigira kushandiswa pane x86_64 processor ine VBE-inoenderana giraidhi kadhi (nvidia, intel, amd), madhiraivha eAHCI, uye makadhi enetiweki anobva paE1000 kana RTL8168 machipisi.
Zvinyorwa zvitsva zveRoxox 0.5
Kuburitswa kweshanduro nyowani yeRoxox 0.05 kunouya nezvimwe zvitsva zvatinogona kuratidza pakutanga kuti iyo Relibc standard C raibhurari pachayo, yakanyorwa muRust.
Relibc yakamisikidzwa senge inotakurika kuitiswa kweiyo C yakajairwa raibhurari, POSIX inoenderana uye inokwanisa kushanda kwete chete paRedox, asiwo neLinux-based distributions.
Pakutanga paRoxox, forogo yelaibhurari newlib kubva kuCygwin chirongwa Iyo yaishandiswa seyakajairika raibhurari, asi iyo yakanga isina kugadzirirwa kune vagadziri maererano nesecurity uye muchinjika-chikuva. Padanho razvino rekuvandudza, Relibc yatove yakanyanya kurebesa kune newlib mashandiro.
Pamusoro peizvi muRoxox 0.5 nyowani bootloader-coreboot uye bootloader-efi zvakagadzirirwa coreboot neEFI, pahwaro iyo mifananidzo yebhutsu yakaumbwa.
Iwo maraibhurari ekushanda neEFI akanyorwa muRust uye yekutanga kodhi (mubhadharo weiyo coreboot) muRust. Iwo majaja anogona kushandiswa zvakasiyana kubva kuRedox uye mune mamwe mapurojekiti.
Iyo manejimendi manejimendi sisitimu yakagadzirwazve kuti ipe iyo chaiyo tsigiro yekusarudza uye yekuvhota mafoni.
Pane dzimwe nhau dzinogona kusimbiswa mukuzivisa kweshanduro iyi nyowani yatinowana:
Rizere rutsigiro rwekuyeuka mepu (mmap) mabasa akaitwa.
Tsigiro yePthreads yakawedzerwa uye mamwe masisitimu mafoni akafungidzirwa kugadziriswa kwemasaini.
Yakagadziridzwa LLVM rutsigiro, ichibvumira musangano werustc neMesa (c llvmpipe).
Nekuda kwekuchinja kune iyo nyowani system raibhurari, rutsigiro rwezvakawanda zvitsva zvinoshandiswa zvakawanikwa.
Yakazara makumi matanhatu neshanu mapakeji akawedzerwa.
Zvekuisa muRoxox pane atove mapakeji akagadzirira kushandisa nemaraibhurari SDL2, ffmpeg, cairo, gstreamer, pcre, glman, libiconv, libsodium, uye meseji, seti yemakomputa, kuitiswa kweOverGL, application yeOverGL, Vcckv Mesa, scummvm emulators, madositi netsika, uye application yeOpenGL mune yayo seti. Nukem 3D), openttd uye FreeDoom.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Redox, inoshanda system yakanyorwa neRust programming mutauro
LibreOffice: Gadzira Fillable kana Editable PDF
Lollypop, inokwezva uye inoshanda mimhanzi inoridza iyo ine (ingangoita) yakandigonesa